သင့်အရောင်းအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ခွဲတမ်းများမရောက်ရှိရခြင်းအကြောင်းအရင်း ၅ Martech Zone
သင့်အရောင်းအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ Quotas များမရောက်ရှိသည့်အကြောင်းရင်း ၅
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 17, 2015 Douglas Karr
Qvidian ကသူတို့ထုတ်ဝေသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အခြေအနေများအစီရင်ခံစာ ၎င်းသည်အရောင်းဌာနများအကြားစာရင်းဇယားများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်တွေ့ရှိချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရောင်းအားစွမ်းရည်ကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီသင့်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့အစည်းများသည်ရန်လိုသောကြီးထွားမှုဆီသို့အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်နေသည်။ အရောင်းခေါင်းဆောင်များသည်နည်းဗျူဟာမြောက်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မဟာဗျူဟာအဆုံးမှအဆုံးသို့ရောင်းအားကွပ်ကဲခြင်းဖြင့်သူတို့၏အဖွဲ့များကိုပိုမိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်အာရုံစိုက်ရမည်။
ရောင်း ၀ ယ်ရေးဌာနများသည်အနိုင်ရရှိနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခွဲတမ်းရရှိမှုတိုးတက်အောင်တွန်းအားပေးနေခြင်းကြောင့်ခွဲတမ်းများမရောက်ရှိခြင်းအတွက်အဓိကအကြောင်းအချက် ၅ ချက်ရှိသည်။
အခွင့်အလမ်းများ၏ 42% အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူး.
ရောင်းအားကြောင့်ဖြစ်သောအခွင့်အလမ်းများ၏ 41% အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ထိရောက်စွာတန်ဖိုးဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်း.
ရောင်းရငွေကြောင့်အခွင့်အလမ်းများ၏ 36% ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် သည်အခြားအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကိုနှင့်အတူဝန် နှင့်ရောင်းရငွေအချိန်ဖြုန်းမဟုတ်ပါဘူး။
အခွင့်အလမ်းများ၏ 36% ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်များတက်ပြန့်ပွားရှည်လျားလွန်းပါသည်.
အခွင့်အလမ်းများ၏ 30% ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရောင်းမန်နေဂျာတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်မလေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့လို့ပါ.
အကယ်၍ ကုမ္ပဏီများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နှင့်အဖြစ်အပျက်များနှင့်အခြားဆက်နွယ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်ထိုဆက်နွယ်မှုကိုထပ်မံပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်သည်။
အထူးသဖြင့်ဖောက်သည်များ ၀ ယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနားလည်ရန်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ဖောက်သည်အများစုကြည့်ရှုနေစဉ် ကတော့ယုံကြည်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအဓိကထားပြီး ၀ ယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကိုသူတို့လွတ်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
အဆိုပါ အရောင်း Execution ခေတ်ရေစီးကြောင်း အစီရင်ခံစာအများစုသည်ယနေ့ခေတ်အဖွဲ့အစည်းများသည်အမြော်အမြင်ရှိရှိဖြင့်ရန်လိုသောကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုသို့ပြောင်းရွေ့နေစဉ်၊ rep rep up ကဲ့သို့သောအတားအဆီးများ၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော ၀ ယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပါဝင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ analytics အားလုံးသည်အောက်ခြေလိုင်းပျက်စီးစေရန်၊ ခွဲတမ်းရရှိမှုကိုတားဆီးရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ခြင်း၊
Tags: 2015ဖောက်သည်ဝယ်သည်ဖောက်သည်ဝယ်လုပ်ငန်းစဉ်ခွဲတမ်းလွဲချော်ရောင်းအားခွဲတမ်းလွဲချော်ကဗျာအရောင်းအဘို့အကြောင်းပြချက်အရောင်းအလိုအလျောက်အရောင်းစွမ်းအားအရောင်းကွပ်မျက်အရောင်း Execution ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရောင်းအဆိုပြုချက်အရောင်းခွဲတမ်း
ဘာကြောင့်နှင့် Gravatar အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရမည်နည်း
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 29
သေချာပေါက်ပိုကောင်းထိရောက်မှုကို ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်အမှန်တကယ်အကြီးအစာရင်းဇယား။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုပြောင်းလဲရန်နှင့် ပို၍ တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒီဇင်ဘာ 16, 2020 မှာ 1: 10 AM
Insightful article အရောင်းအဖွဲ့မှာကြာရှည်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်သင်မီးမောင်းထိုးပြထားသောအချက်များကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ငါအရောင်းအလိုအလျောက်အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏အချက်နှင့်အတူသဘောတူသည်။ ဒါကပိုကောင်းတဲ့ရောင်းအားဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ငါ့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
23:2021 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 37
ငါလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏မရှိခြင်းရောင်းအားအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်မရောက်ရှိနိုင်သည့်အဓိကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ခဲ့ရပြီ လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ “ အချိန်ကပိုက်ဆံပဲ!”